स्वास्थ्य पेजचुम्वनले निम्त्याउँछ यस्ता रोग, कसरी जोगिने ? - स्वास्थ्य पेज चुम्वनले निम्त्याउँछ यस्ता रोग, कसरी जोगिने ? - स्वास्थ्य पेज
चुम्वनले निम्त्याउँछ यस्ता रोग, कसरी जोगिने ?
चुम्बनका फाइदा र बेफाइदा दुबै छन् । चुम्बनले पनि रोग निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तपाई एउटै स्ट्राले कोक पिउनुहुन्छ या एउटै चम्चाले आइसक्रिम खानुहुन्छ भने पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
चुम्बनबाट सर्ने यो रोगलाई ‘किसिङ डिजिज’ भनिन्छ । दिल्लीका मेडिकल अफिसर डा. अनुराग शर्माका अनुसार चुम्बनबाट गर्ने रोगलाई मेडिकल भाषामा संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस वा ग्रन्थी ज्वरो भनिन्छ ।
डा. शर्माका अनुसार किसिङ रोग धेरै भाइरसबाट सर्ने गर्छ तर ९० प्रतिशत केसमा यो रोग मानिसको र्‍यालबाट हुने एपस्टेन बार भाइरस (ईबीभी) बाट सर्ने गरेको देखिएको छ ।
जब एक व्यक्ति चुम्बन गर्दा अर्को व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछ, तब यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ।
अमेरिकी संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी)का अनुसार चुम्बन रोगलाई मानव हर्पेस ४ पनि भनिन्छ । यो भाइरस हर्पीज फेमिलीको एक भाइरस हो । चिकित्सकका अनुसार यो रोग आफैँमा सीमित हुने रोग भए पनि उपचार पछि निको हुने बताउँछन् ।
एपस्टीन बार भाइरसले सामान्यतया युवा र किशोरकिशोरीहरूलाई असर गर्छ । बालबालिकामा सङ्क्रमण भए पनि लक्षणहरू कम देखिन्छन् भने वृद्धहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ । यो भाइरस रक्तसञ्चार, यौन सम्पर्क, खोक्दा र हाछ्युँबाट सर्छ ।
किसिङ रोगको कुनै खास उपचार छैन। यो एक भाइरल रोग हो जहाँ एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन । तसर्थ, रोग सहायक ट्रीटमेन्टबाट उपचार गरिन्छ । सामान्यतया यो रोगका लक्षणहरू १ महिनामा कम हुदै जान्छ यो रोगबाट बच्न कुनै खोप बनाइएको छैन ।
भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको १ हप्तापछि थकानसँगै ज्वरो आउने, शरिर दुख्ने र घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । घाँटी दुखेको बेला कम बोल्नुहोस्। मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुहोस् ।
-मुख र अन्य सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् ।
-परिवारमा कसैलाई पनि जुठा भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्न नदिनुहोस् ।
-अरू कसैको गिलास प्रयोग नगर्नुहोस् ।
-खाना र ड्रिङ्स अरूसँग शेयर नगरी खानुहोस् ।